ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2009 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု3comments
Transposh မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးဖြန့်ချိကြေညာဖို့ပျော်ရွှင်နေကြသည်, မကြာမီမှာရရှိနိုင်ဖြစ် directory ကို plugin ကို WordPress.
ငါတို့မှာမဆိုပြဿနာများကို / bug တွေ / စိတ်ကူးများနှင့် ပတ်သက်. အသိပေး ကျေးဇူးပြု. ဖွံ့ဖြိုးရေး site ကို.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: စတင်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2009 တွင် 5:29 ညနေ
ဒီ plugin ကိုအဘို့အအတော်များများကကျေးဇူးတင်စကား. ဒါဟာ (ဖွစျလိမျ့မညျ!) ငါမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရှာနေခဲ့ကြအတိအကျဘာ.
ငါ WordPress ကို Mu site ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ – ငါကအထူးသကြောင်းရည်ရွယ်သည်မဟုတ်ကိုသိ – ဒါပေမယ့်အဲဒီချို့ယွင်းချက်တယ်:
သတိပေးခြင်း: implode() [function.implode]: မကောင်းတဲ့အငြင်းပွားမှုများ. လိုင်းပေါ် /home/politicalnewsblogs/public_html/wp-content/plugins/transposh-translation-filter-for-wordpress/transposh_admin.php အတွက် 290
သတိပေးခြင်း: implode() [function.implode]: မကောင်းတဲ့အငြင်းပွားမှုများ. လိုင်းပေါ် /home/politicalnewsblogs/public_html/wp-content/plugins/transposh-translation-filter-for-wordpress/transposh_admin.php အတွက် 291
အဆိုပါအလံ admin ရဲ့ panel ကအပေါ်ကိုတက်မပြခဲ့ပါဘူးနှင့်တည်းဖြတ်နိုင်သူများအတွက်ရွေးချယ်မှုမှမထင်ခဲ့ပါဘူး “ကိုင်”.
lang ကိုရှေးခယျြခဲ့ပြီးသောမည်သည့်ဘာသာစကား, ဘာသာပြန်ချက်ရှိရာ.
ဒီ plugin ကိုအတူကံကောင်းပါစေ. ဒီသဘာဝကျပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်. အမှုအရာအလုပ်မလုပ်စေနိုင်ပါတယ်သည့်အခါအသုံးပြုခစျြလိမျ့မညျ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2009 တွင် 9:38 ညနေ
သင့်ရဲ့ bug ကိုအစီရင်ခံစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ကိုယ့်ကဒီများအတွက်လက်မှတ်ဖန်တီးခဲ့ကြပြီး ASAP ကစမ်းနှင့်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်,
သငျသညျဒုတိယအစိတ်အပိုင်းအတွက်ပြဿနာကိုရှင်းပြနိုင်သလား? စိတ်ကူးအဲဒီဘာသာစကားအတွက်အကြောင်းအရာပြသရန်ဘလော့ဂ် / lang / content တွေကိုရဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်
ဒါ့အပြင်ကောင်းသော SEO ဆိုသည်မှာကူညီပေးသည်, သင်တို့ကိုမျှော်လင့်ထားသောအရာကိုမဖြစ်?
နောက်ဆုံးရေးသားချိန် 28/02 – 23:50 – ဤသည် bug ကိုထုပ်ပိုးအတွက်ပုံဖြစ်ပါသည်, အဆိုပါရဖို့ Transposh ဖို့ plugin ကို directory ကိုအမည်ပြောင်းကျေးဇူးပြုပြီး
မတ်လ 1, 2009 တွင် 2:02 ညနေ
ငါက set up လုပ်ဖို့အချိန်ကိုတှေ့ရသေးပေမယ့်, ဒါကြောင့်ယခုသင့်အကူအညီနှငျ့အကွံဉာဏျအားဖြင့်ပြုပြင်နေသည်.
ဒါဟာအတော်ကောင်းတဲ့ plugin တခုဖြစ်တယ်.